Beijing L & Z Medical vakapinda yechi30 China Association yeMedical Equipment Musangano uye Exhibition
ne admin pane 21-08-02
30th China Association yeMedical Equipment Musangano uye Exhibition, inotsigirwa neChina Association of Medical Equipment, ichaitirwa muSuzhou International Expo Center kubva muna Chikunguru 15 kusvika 18, 2021. China Association yeMedical Equipment Musangano inobatanidza "zvematongerwo enyika, indasitiri, kudzidza,. ..
Nzwisisa 3 nzira stopcock mune chimwe chinyorwa
Kujeka kujekesa, kuwedzera kuchengetedzwa kweiyo infusion, uye gonesa kucherechedzwa kwekubuda; Zviri nyore kushanda, zvinogona kutenderedzwa nemadhigirii mazana matatu nemakumi matatu, uye museve unoratidza mafambiro aungaita. Kuyerera kwemvura hakuna kukanganiswa panguva yekushandurwa, uye hapana vortex inogadzirwa, iyo inoderedza th ...
Chii chinorehwa ne "ura hwepamuviri kusagadzikana" pakurapa?
Mumakore achangopfuura, izwi "kudyisa kusagadzikana" rave kushandiswa zvakanyanya kuchipatara. Chero bedzi sekutaura kwekudya kunovaka muviri, vazhinji vashandi vekurapa kana varwere uye mhuri dzavo vachizobatanidza dambudziko rekushivirira nekusashivirira. Saka, chii chaizvo chinoita kuti chikafu chekudya chindishivirire ...
Nzira dzekuchengetedza kwekudya kwekudya kwakakwana
Nzira dzekuchengetedza kwekudya zvinovaka muviri ndedzinotevera: 1. Iva nechokwadi chekuti mushonga wemushonga pamwe nemidziyo yekumukisa zvakachena uye hazvina hutachiona Mhinduro yezvinovaka muviri inofanira kugadzirwa munzvimbo isina hutachiona, yakaiswa mufiriji iri pazasi pe4 ℃ yekuchengetedza kwenguva pfupi, uye kushandiswa mukati Maawa makumi maviri nemana. Iyo ...
Musiyano uye nesarudzo pakati pekunyorera hutano
1. Kurongwa kwekutsigirwa kwehutano hwekiriniki Enteral chikafu (EN) inzira yekupa zvinovaka muviri zvinodiwa kune metabolism uye nezvimwe zvakasiyana zvinovaka muviri kuburikidza nemudumbu wemudumbu. Parenteral chikafu (parenteral chikafu, PN) ndeyekupa chikafu kubva mutsinga seyakagwinya sup ...
Mamiriro ekuvandudza uye makwikwi enzvimbo yemusika wepasi rose wekurapa musika mu2021
musika wedhizaini muna 2021: kuwanda kwemabhizinesi ekutanga Nhanganyaya: Iyo indasitiri yezvigadzirwa yezvokurapa inyanzvi-yakasimba uye inoshandisa mari indasitiri inopindirana nemhando yepamusoro senge bioengineering, zvemagetsi ruzivo, uye imaging yezvokurapa. Seye indasitiri iri kusimukira inoenderana ...
Maitiro ekuverenga eiyo parenteral hutano huwandu hwehuwandu
Parenteral chikafu - zvinoreva kupihwa kwehutano kubva kunze kwematumbo, senge intravenous, intramuscular, subcutaneous, intra-mudumbu, etc. Nzira huru iripakati, saka kudya kwevabereki kunogona kudanwa kunzi intravenous kudya mune yakamanikana pfungwa. Kuvhara chikafu-chikafu ...
Matipi gumi kubva kune nyanzvi pane zvekudya uye chikafu kune hutachiona hutsva hwecoronavirus
Munguva yakaoma nguva yekudzivirira uye kutonga, kuhwina sei? 10 yakanyanya mvumo chikafu uye chikafu nyanzvi kurudziro, nesainzi kugadzirisa hutachiona! Iyo nyowani coronavirus iri kutsamwa uye inokanganisa moyo yevanhu 1,4 bhiriyoni munyika yeChina. Mukutarisana nedenda, mazuva ese h ...
Mashandiro enzira yekudya yemhino
1. Gadzirira zvigadzirwa uuye nazvo kumubhedha. 2. Gadzirira murwere: Munhu anoziva anoziva anofanira kuita tsananguro kuitira kuti awane kubatana, uye agare pasi kana pakamira. Murwere anomira pasi anofanira kurara pasi, kudzorera musoro wake kumashure, kuisa tauro rekurapa pasi peshaya ...
Nyanzvi kuraira kwekurapa kwekurapa kwekurapa kwevarwere vane COVID-19 nyowani
Iyo yazvino novel coronavirus pneumonia (COVID-19) yakapararira, uye vakweguru uye varwere vane chirwere chisingaperi vane hutano husina hutano hwehutano hunorwara zvakanyanya mushure mehutachiona, zvichiratidza kurapwa kwakanyanya kwekudya. Kuti uwedzere kusimudzira kupora kwevarwere, ...